YORKIE-APSO DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Yorkie-Apso Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Yorkshire Terrier / Lhasa Apso Dogs Nooc Isku Daran
'Kani waa Cody labkeyga Lhasa Apso / Yorkie oo isku jira oo 1 sano jir ah oo culeyskiisu yahay 16 rodol oo laga keenay Kenny Sunny Terrace. Isagu waa ninka ugu fikirka yar. Habeenkii, wuxuu i siiyaa 'waji dhaqasho' oo dhammeystiran haddii aan hortiisa ka tago, xitaa daqiiqad uun, wuu joojinayaa wuxuu sameynayo, wuuna i raadinayaa si aan u arko haddii aan fiicanahay. Isagu waa kubad weyn oo jacayl ah. '
Yorkie-Apso ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Yorkshire Terrier iyo Lhasa Apso . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Cody labka Lhasa Apso / Yorkie lab isku darka 1 jir culeyskiisu yahay 16 rodol oo laga keenay Kenny Sunny Terrace.
'Cody labka Lhasa Apso / Yorkie waxay isku dhafan yihiin 1 sano jir miisaankeedu yahay 16 rodol oo laga keenay Kenny Sunny Terrace. Sawirkan waxaa la qaaday ka dib markii uu xiiray. Uma muuqdo inuu ka fikirayo, xagaaga halkan aad ayey u kululaanayaan!
Bibi the Yorkie Apso eey yar oo ah 3 1/2 bilood jir.
midabada isbaanishka ee loo yaqaan 'spanel cocker'
'Tani waa Daisy. Iyadu waa 8-bilood jir Yorkie Apso eey ah. Hooyadeed waxay ahayd Yorkshire Terrier aabeheedna wuxuu ahaa Lhasa Apso). Iyadu waxay ahayd eeygii ugu horreeyay, waana amiiraddayda yar. Iyadu way yar tahay laakiin waxay leedahay cod weyn, in kasta oo ay qayliso oo keliya marka qof daaqadda ka gudbo ama albaabka garaaco. Waxay u muuqataa inay caqli badan tahay oo ay fududahay in la tababaro. Iyadu, sida walaalkeed ka yar Rufus the Maltichon, waxay jeceshahay salaaxista laakiin waa mid firfircoon. Ciyaarteeda ay jeceshahay ayaa ah kubbadeedkeeda xiisaha leh ee si joogto ah u ciyaaraya soo-qaadashada oo ay dib ugu soo celinayso iyada oo dabada la ruxruxaysa. Aad ayey u qurux badan tahay qof walbana oo i arka aniga oo socda iyada ayaa faallooyin ka bixinaya sida ay u qurux badan tahay wuxuuna weydiiyaa nooca ay tahay iyada oo sida iska cad aysan aheyn Yorkshire Terrier sababo la xiriira dhagaheeda floppy iyo dabadeeda oo gadaal u fuuleysa. Waxay socotaa nus saac nus maalin walba hareeraha hareeraha iyada iyo walaalkeed weyn Rufus, laakiin waxaan ku kaftamaynaa inaan dhahno shes like a bunny Duracell maadaama ay waligeed socon karto! Xaqiiqdii iyadu waa maamulaha u dhexeeya labadoodaba sidii aan u helnay iyada laba bilood ka hor intaanan helin Rufus sidaa darteed iyada ayaa xukumaysa kuwa ugu roon. Laakiin iyadu si fiican ayey isaga u qaadatay waana ku faraxsanahay sida ay iskula qabsadaan iyo sida ay isu jecel yihiin. Waxay sidoo kale aad ugu fiican tahay carruurta waxayna si gaar ah ugu xiran tahay wiilka aan adeerka u nahay ee Riley oo kaliya isagoo dhahaya magaciisa ayaa dabada ka riixaysa. Daisy waxay umuuqataa inay heshay astaamaha ugufiican labada nooc waxayna caawineysaa in hooyadeed iyo aabaheed ay labaduba yeeshaan dabeecad wanaagsan. Iyadu waa eey cajiib ah. '
Daisy the Yorkie Apso eey yar oo jirta 8 bilood.
Layla, oo ah Yorkie-Apso oo jirta 11 bilood, culeyskeeduna yahay 6.5 rodol - Hooyadu waxay ahayd Lhasa Apso halka aabuhuna uu ahaa Yorkshire Terrier.
Tani waa 8-toddobaad jir ah Yorkie-Apso eey ka timid hooyada Lhasa Apso iyo aabe Yorkie. Lahaanshaha sawirka Sunny Terrace Kennel
Eeg tusaalooyin badan oo Yorkie-Apso ah
intee le'eg ayey helayaan isbaaniisooyinka guga
mini iskudhaf yar oo qasab ah
badh poodle badh retriever dahab ah
ugaarsiga eyga oo sawirro wata
sanka guduud puppy puppy puppy